10 Barnaamij oo lagu bilaabayo sanadka 2015 sida ugu macquulsan | Androidsis
Sannadkii 2014 ayaa wax badan bixiyay, horena sannadkaas ayuu uga tagay, waxaan ku jirnaa 2015 tamar iyo himilooyin cusub. Laakiin, maxaa loo yaqaan 'Android', 2014 waxay ahayd sanad aad u soo saar badan oo leh codsiyo cusub oo siiyay ogeysiiska ugu badan isla markaana isku soo koobay boosteejooyinka cusub ee aan inta badan helno bilaha.
Iyo maxaa ka fiican sidii loo bilaabi lahaa sanadka intii aan ku rakibayay qaar ka mid ah barnaamijyadi ugu fiicnaa ee 2014 naga tagay sida Pushbullet, Carousel ama Unclouded. Waxaa jira kuwa badan oo badan, laakiin xulkan 10-ka barnaamij ayaa ah tan ugu wanaagsan ee hadda laga heli karo Android, waana sabab ku filan oo ay uga tagi karaan meel yar oo taleefankaas cusub ama kaniiniga ah oo aad hadiyad ahaan ugu heli karto in yar maalmood.
2 Link xumbo
4 Shaashadda Qufulka Xiga
5 Jadwalka Sunrise
6 Aan la dhawaaqin
10 Halkan Beta
Pushbullet waxay noqon kartaa si fiican mid ka mid ah barnaamijyadan si loo qaabeeyo sanadka innaga tagay. Pushbullet waxaad kuheleysaa dhamaan aaladahaaga oo lawaafajinayo si aad udhaafto sawirada, URL-yada, feylasha ama waxkasta. Xitaa waxay kuu ogolaaneysaa inaad haysato dhammaan ogeysiisyada ka yimaada taleefanka kombiyuutarka haddii xulashooyinka lagama maarmaanka ah la hawlgeliyo.
Anigu waxaan ahay taageere Chris Lacy, waan qirayaa, iyo mid ka mid ah waxyaabaha cusub ee lagu soo kordhiyay sannadkan la soo dhaafay siduu yahay Link xumbo ayaa, shaki la'aan, mid ka mid ah daalacashada shabakadaha ugu fiican in aan maanta ku hayno Android. Waxaad gujineysaa xiriiriye, xumbo sabaynaysa ayaa furmaysa oo muujinaysa rarka bogga, markay dhammaystirna, way naga hor fureysaa iyadoo aan waqti lumin.
Waa sharadka Google ee hagaajinta maaraynta dhammaan emails ee ku soo dhaca sanduuqa, tanina lafteeda waa hawl Herculean ah, oo xilligan la joogo u muuqata inay fulinayso. A app cajiib ah sifiican u horumarsan oo noqon kara saaxiibka ugu fiican ee Gmail.
Shaashadda Qufulka Xiga
Una app aad u fiican oo loogu talagalay qufulka shaashadda taleefanka iyo in ay soo saartay shirkadda Microsoft lafteeda. Waa wax lala yaabo dad badan oo ay weheliyaan barnaamijyo kale oo badan oo ka farxiyay adeegsadayaal badan. Wiilasha Garaash Microsoft kuwaas oo jecel inay horumariyaan barnaamijyada wakhtigooda firaaqada ah, Shaashadda Lock Next ayaa ka mid ah kuwaas.
Si Widget Bisha waxay naga wada yaabisay inay noqoto widget qurux badan oo la socda Kalandarka Google, Jadwalka Sunrise waa waxa kaliya ee laga filan karo kalandarka. Waxba kama maqna waana bedelka saxda ah ee barnaamijka jadwalka gaarka ah ee Google.
Aan la dhawaaqin
Immisa barnaamij ayaad u haysaa kaydinta daruurigaaga? Xaqiiqdii in yar, laakiin ka waran haddii aad rabto inaad ogaato sidee loo maareynayaa booska mid kasta oo ka mid ah waa inaad aadaa Aan la dhawaaqin. In kasta oo xilligan ay kaliya bixiso taageerada Drive iyo DropBox, habkan waxaad awood u yeelan doontaa inaad ogaato kuwaas oo ah fayl qaada dhammaan kaydinta daruuraha aad haysato.
Unclouded - Maareeyaha Cloud
Haddii muuqaalka kore ee barnaamijyada cusub ee ka socda Microsoft sida "Next Lock Screen" ay mar hore ahayd wax lala yaabo, ah imaatinka shirkadda Nokia Waxay ahayd mid kale oo waawayn. A launcher fiican kaas oo isku dayaya inuu fududeeyo khibrada Android. In kasta oo ay ku jirto beta, haddana weli waa bilaawe aad u xiiso badan.
Laga soo bilaabo DropBox ayaa ka yimid WAYDAARKA sanadkii la soo dhaafay si ay u muujiyaan dhammaan sawirada lagu shubo daruurta lafteeda iyo si dadka isticmaala ay ula wadaagi karaan sida ugu macquulsan. Codsi weyn oo si dhakhso leh loogu daawado dhammaan sawirada lagu soo rogay daruurtan.
Ugu dambeyntii Android cuntada cuntada si aan ugu midowno midkeenna wax kasta oo maskaxda ku soo dhaca, waxa laga dirayo a si otomaatig ah emayl ugu soo dir marka aad sawir soo rareyso on Instagram ama ku soo dir maalin kasta emaylka dhammaan wararka RSS ee xiisahayaga.
Khariidadaha qad la'aanta ee Nokia waayo, dood ku saabsan xukunka Khariidadaha Google isla Android ka ah. Qoraal ujeeddo ah oo ka dhex muuqda Google sababahan jira ee khariidadaha qad la'aanta ah si markaa isticmaaleyaashu u soo dejisan karaan ugana dhex wareegi karaan goobo cayiman oo ay calaamaddu ku xanuunsanayso
HALKAN Khariidadaha WeGo iyo Navigation
Developer: HALKAN KA DHAGEYSO LLC
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Kiniiniyada Android » Ku bilow 2015 10 barnaamij oo waaweyn oo taleefankaaga Android ama kaniiniga ah
Oo ka warran idaacadda FM-ka inta uu nool yahay?
Waxaan isticmaalaa «miRadio (FM Spain)». Hufan, configurable iyo ikhtiyaarka xiritaanka otomaatiga ah. Waxay leedahay dhammaan idaacadaha FM-ka ee Spain oo ay ku sifoobeen beelo madaxbannaan oo si joogto ah loo cusbooneysiiyo. Sidoo kale waa mida kaliya ee aan ka dhageysan karo Radio MARCA.
Jawaab Maribel F.
U samee shaandhooyin kuu gaar ah sawirradaada Shift